ပန်ဒိုရာ: ၀ိုင်မြစ်ချိုထဲမှာ မျှောလိုက်တယ် ဂျွန် -၂
Posted by pandora at 1:33 PM
ကျနော်က တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် အခုတလော Band of brothers ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်ကြည့်နေမိတယ်။
သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေပါသလို၊ စစ်အကြောင်းကို လည်း ဆင်ခြင်နေမိတယ်။ တချိန်က ဥရောပဟာ အချင်းချင်း စစ်ခင်းခဲ့ရာ၊ ပထမ ကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်၊ စစ်အေးတိုက်ပွဲတွေ ဆင်ခဲ့ရာ၊ အခု တော့ ကွာခြားနေတယ်။
အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာ မရပ်စဲနိုင်ခဲ့တာ စစ်ပွဲတွေပဲ.. တဲ့" ဟုတ်လိုက်လေ...
ကျနော်တို့လည်း ဘယ်တော့များမှ စစ်တွေရပ်ရပါ့။
ရှုံးပြီး ရှင်ကျန်သူတွေကို ကူတိုက်ဖို့ တတ်အားသရွေ့ ပါဝင်ပါရစေ ပန်ပန်ရေ..
ကိုယ်တိုင်ရေးတာနော်။ မယုံနိင်ဘူး။ ဒီလိုရေးတတ်တယ်။ လူလေး နုနုနယ်နယ်နဲ့။
အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာ မရပ်စဲနိုင်ခဲ့တာ စစ်ပွဲတွေပဲ..
အထက်က မောင်လေး တစ်ယောက် ပြောသလို ပဲ
ကောင်းတယ် လို့ ချီးကျူး ရမှာ အားနာတယ်
ဒိထက်ပိုကောင်းတဲ့ စကားလုံးလေး ရှာမတွေ့ လို့ပါ
တဆက် ထဲ..ကျမတို့ ရင်ထဲများ.. အချစ် နဲ့ အလွမ်း ကဗျာတွေ ပဲ ရှိနေတတ်တာ..ဒီကဗျာလေး ဖတ်ပြီး
အပြင်းစားဖြစ်နေတယ် ဒါပေမယ့် ဒါ ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့
နာမည်နဲ့တွဲမိနေတဲ့အရေးအသားပါပဲ..CARRY ON !!
အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာ မရပ်စဲနိုင်ခဲ့တာ စစ်ပွဲတွေပဲ.. တဲ့...
သိပ်မှန်တာပဲဗျာ...ဒီထက်ပိုပြီး ဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူး မပန်ရေ...
ဂျွန် ၁ ကို အရင်သွားဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျ နောက်တော့ ဒီကဗျာလေးလာပြန်ဖတ်တယ် ဖော်ကျူးထားတာလေး မိုက်တယ် ကဗျာက ဟန်နဲ့ မာန်နဲ့ ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ် သတိရမိသေး သဲအောက်က ဓားလား သေချာမမှတ်မိလို့ အဲ့ကဗျာလေးထဲက ဒီလိုလက်ရာလေးတွေ သတိထားမိတယ် ။
ကိုယောဟန်အောင်က ဟုတ်လိုက်လေလို့ ပြောတဲ့ ကဗျာနှစ်ကြောင်းကိုပဲ ကိုးကားမလို့ ညီမပန်ရေ။ သူက ဦးသွားပြီ ... ။ အလိုရှိတဲ့အချိန်မှာတောင် မရပ်စဲနိုင်တဲ့ စစ်ပွဲတွေကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကို ရှာဖွေနေမိတာ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရူးများနေပြီလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ခုတလော..ကဗျာသမားတွေကလည်း ခက်ခက် ခဲခဲ ဆို့ဆို့နင့်နင့်တွေပဲ စပ်နေကြပါလား။း(
စိတ်ကူးတေးသီ ကနေပြန်လာတော့ ရင်မောလာတယ်... ဟိုသည် လျှောက်သွားရင်းနဲ့ မွန့်ရဲ့ အော်သံကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကြားလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်
ရှင်သန်ခြင်းတွေ ဖြန့်ခင်းထားတဲ့နေရာကို အရောက်မှာ စစ်ပွဲတွေနဲ့ တွေ့လိုက်တော့ အမောဆို့သွားတယ်...
၀ိုင် နှစ်ခွက်လောက် တိုက်စမ်းပါဗျာ...
ဒီကဗျာကိုလဲ ဂျွန် ၁ လိုပဲကူးသွားလိုက်ပါတယ်..
သွေးစက်တွေကြားကိုပဲ ပြန်သွားလိုက်ကြပါစို့ ဂျွန်ရယ်..။""
အစ်မပန်ရေ ကဗျာလေးခံစားသွားတယ်ဗျာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ကြိုက်တယ် ကောင်းသောနေ့ပါဗျာ :)
အချိန်ကာလသည်ကား သွေးစက်တွေဆီပြန်သွားဖို့ ဦးတည်နေလေ၏... လို့များ အစချီရလေမလားပဲ..။ သေချာတာကတော့ စစ်တွေ မပြီးနိုင်သေး။ အဲဒီအခါ ဂျွန်နဲ့ လိုက်ရမယ်လားဟင်..။ ၀ိုင်နီနီတွေ ကြိုက်ပေမဲ့ သွေးနီနီတွေတော့ ကြောက်တယ်..။ ခက်တယ်နော်..။
ရှုံးပြီး ရှင်ကျန်သူတွေကို ကူတိုက်ဖို့ သွေးစက်တွေကြားက စစ်မြေပြင်ကို
ပြန်သွားတဲ့အခါကျ အားလုံး အတူတူ
သွားကြတာပေါ့ လေ.. နော်...
ကမ္ဘာဟာ စစ်ကို မလိုအပ်ပဲ ရရနေတယ်
စစ်ဟာ ကမ္ဘာကို လိုအပ်ပေမယ့်
ကမ္ဘာဟာ စစ်ကို မလိုအပ်ခဲ့ဘူး။
ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းကဗျာဆရာရဲ့ စာသားလေးကိုပဲ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။ မပန်ရဲ့ကဗျာလေးကိုလည်း ကြိုက်သွားပြီ။ ခင်မင်လေးစားလျက်။
ပြီးတော့ မနော်လိုပဲ `ဂျွန်ကပြောတယ်အားလုံးမြစ်ဆီသို့´ ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးကို ပြေးသတိရလိုက်မိသေးတယ်။ ဆရာရာမျိုးလားမသိဘူး။ ရေးတာက။ အဲဒီကဗျာလေးထဲက `ဂျွန်ရေ ကိုယ့်လက်ကို ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ရင် တစ်နှစ်သုံးကိုရေမယ်၊ ငါတို့ ဟာ အညံ့စားတွေ မဟုတ်ဘူး´ ဆိုတဲ့ စာသားလေးကိုတောင်မှတ်မိနေသေးတယ်။
ငါတို့ ရင်ဘတ်တွေနဲ့ တွန်းတွန်းပြီး စစ်မြေပြင်ကို သွားကြမယ်…
ပန်… ဂျွန်ဖတ်တိုင်း ရင်ထဲမှာ ခံစားရလွန်းလို့ ….
ရယ်မောဖို့ စောင့်ရတာ မျက်လုံးတွေတောင် ညောင်းလို့ ....
အသုံးလေးလှတယ် ။ ၀ိုင်မြစ်ချိုထဲမှာ မျှောလိုက်တယ် ဂျွန် -၁ ကိုပါ ခံစားသွားပါတယ် ။း)
မပန်ရေ ကျွန်တော်မှားသွားလို့ ဗျာ။ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ 'ဂျွန်က ပြောတယ် အားလုံးမြစ်ဆီသို့ဆိုတဲ့ကဗျာက မောင်သိန်းဇော် ရေးတာပါ။ ပြီးတော့ စာသားတွေကလည်း လွဲနေတယ်။ မောင်သိန်းဇော်ရဲ့ကဗျာလေးကိုတော့ တပိုင်းတစ ရပေမယ့်မရေးလိုက်တော့ပါဘူး။ အဲဒါလေး လာပြောတာပါ။
ကဗျာထဲက ပုံရိပ်တွေကို ချရေးကြည့်မိပါတယ်..
အခုအထိတော့ ဘာမှ လုပ်လို့မရသေးဘူး....
သတင်းတွေကလည်း မထူးသေးပါလား ကွယ်
ငါတို့ရဲ့ ဒါဏ်ရာတွေကိုပဲ အရည်ဖျော်လို့ ပြည်သူတွေ သောက်သုံးမဲ့ အချိန်ကို စောင့်နေသတဲ့ကွယ်။
ဆိုတော့ အချိန်တိုင်း မမြင်ရဘူးဆိုတဲ့အရာဟာ စက္ခုအာရုံမြင်ကွင်းတွေ သက်သက်တော့မဟုတ်တော့ဘူး။ အ၀ိဇ္ဖာမျက်လုံးနဲ့ နှလုံးသားတွေနဲ့ ခင်းကျင်းတဲ့စစ်ပွဲတွေ..ကြောင့် ကန်းနေတဲ့အချိန်တွေ နေ့ ည တွေ ကိုမြင်လာရတဲ့ ကဗျာစကားလုံးတွေဆီက သွေးညှီနံ့ တောင်ရလိုက်သလို..
မှားတဲ့ဘက်မှာလည်း အသက်နဲ့ရင်းပြီး လိုက်ဖို့လိုတာပဲ..
လူအသက်တစ်ချောင်းဟာ လူတွေပညတ်ထားတဲ့ အမှန်အမှားဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ၊သတ်မှတ်ချက်တွေ လောက်တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး..
အားကြီးတဲ့တစ်ဘက်က တောရိုင်းဥပဒေသနဲ့ အနိုင်ယူတယ်။ အားနည်းတဲ့ ရှုံးနိမ့်သူဘက်ကအသက်တွေနဲ့ လဲရတယ်။ အားကြီးသူရော အားနည်းသူရော ကလူသားတွေဖြစ်နေတယ်။
နိုင်သူရော ရှုံးသူရော နှစ်ဘက်စလုံးမှာပေးဆပ်မှုတွေရှိနေတာပဲ။ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေအတွက်စဉ်းစားမှု ဆိုတာတွေမပါဘူး..
ဒီကဗျာ ကို ဒီကွန်မန့် ရေးဖို့ အကြိမ်ကြိမ်လာဖတ်ခဲ့ကြောင်းပါ။